Archive du 20171025
Tsy mahavaha olana ny mpitondra Tsy afaka hiandry 2018 isika, hoy ny CRAM
Raha niroso tamin’ny « Loabary nasionaly ho fanorenana ifotony sy ho fanarenana an’i Madagasikara» isika Malagasy dia azo natao tsara ny nisoroka ny pesta izay misy isan-taona, mba efa lasa biometrika ny lisi-pifidianana,…
Fivoriana teny amin’ny antenimierandoholona Nokorontanin’ny parlemantera HVM
Araka ny fanazavan’ny loholona avy eo anivon’ny antoko Tiako i Madagasikara, Fernand Jeannot
Vidim-bary eny an-tsena Misondrotra 50 ariary isan'andro ny iray kapoaka
Tato anatin'ny herinandro farany, nisongadina ny fisondrotry ny vidim-bary eny an-tsena, ka nampikaikaika ary niteraka resa-be teny anivon'ny fiarahamonina.
Asa fivarotan-tena Mitsapa hafanana aloha vao miady varotra
Misedra olana tanteraka ireo mpivarotena eto amintsika ankehitriny. Lasa mitondra fitaovana fitsapana hafanana mihitsy mantsy ireo mpanjifany hatramin’ny nisian’ny aretina pesta no ho mankaty,
Fidarohana an-dRah-ckiky Valifafy tsotra izao, 2 lahy nidoboka any am-ponja
Omaly misandratr’andro no niakatra mpitsara mpanao famotorana ingahy Romain 39 taona avy any Vatomandry sy Marcellin 25 taona avy any Amorondran’i Fenoarivo Atsinanana, izay voasambotra noho ny fikasan’izy
Fanjakana ho ratsy fiafara !
Inona no hiafaran’ity fanjakana HVM ity ? Hivoaka amin’ny fomba milamina sy ampahamendrehana sa hinia hamboly korontana sy hanao tsipaky ny miala aina atsy ho atsy ?
Tafakatra 124 ny matin’ny pesta Kajy politika no mahamaika ny HVM
124 ny maty, ka ny 63 tamin'ireo tany amin'ny hopitaly ary ny 61 kosa teny anivon'ny fiarahamonina. 999 ny trangan'aretina, ary 780 nanaraka fitsaboana no nambara fa efa sitrana.
Fanjakana Maraokanina Nanolotra fanampiana 34 taonina hiadiana amin’ny pesta
Noraisin’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier, niaraka tamin’ny minisitry ny raharaham-bahiny, Henry Rabary Njaka ary ny minisitry ny fahasalamana,
Aretina pesta Ny ankizy sy ny tanora no tena lasibatra
Hita tamin’ny antontan-taratasy tatitra momba ny fivoaran’ny aretina pesta eto Madagasikara navoakan’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS)
Tetiandrom-pampianarana Niova ho an’ireo Cisco voakasiky ny pesta
Niova tanteraka ny tetiandrom-pampianarana ho an’ireo fari-piadidiam-pampianarana (Cisco) miisa 25 nahitana ny soritr’aretina pesta manerana ny Nosy.
Pesta any Analanjirofo Tapa-bolana tsy nisy tranga vaovao intsony
Efa manomboka resin’ny faritra Analanjirofo ny valanaretina pesta niseho tany aminy tato ho ato. Araka ny fanazavana sy ny tarehimarika voaray dia tsy nahitana tranga na olona voan’ny pesta sy narary intsony tany amin’izy ireo efa tapa-bolana izao.
Fidiran’ny sekoly katolika Ho raharaha raha hisy mpianatra marary
Hiverina any an-tsekoly anio ireo mpianatra amin’ireo sekoly katolika eto Antananarivo, raha ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fiadidiana ny fanabeazana eo anivon’ity seha-pampianarana ity tetsy amin’ny Falda Antanimena omaly.
Sekoly tsy miankina “Tsy maintsy aloa ny saram-pianarana oktobra”
Namoaka fanambarana omaly ny DNELM, ivondronan’ireo sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana eto amin’ny Faritra Analamanga,